किष्टमा संक्रमितको मृत्युपछि तनाव, मृत्युपछि आइसियूमा लगिएको आरोप - Postmandu
किष्टमा संक्रमितको मृत्युपछि तनाव, मृत्युपछि आइसियूमा लगिएको आरोप
2020-10-07 2020-10-08 PostmanduLeaveaComment on किष्टमा संक्रमितको मृत्युपछि तनाव, मृत्युपछि आइसियूमा लगिएको आरोप
ललितपुर, २१ असोज । ललितपुरस्थित किष्ट अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीको मृत्यु भएपछि तनाव भएको छ ।
बुधबार बिहान बिरामीको मृत्यु रहस्यमय ढंगले भएको भन्दै आफन्तले अस्पताल घेराउ गरी सत्य–तथ्य छानविनका लागि माग गरेका छन् ।
गत शनिबार कोरोना संक्रमण भएपछि नुवाकोट तादी गाउँपालिकाका शेरबहादुर लामालाई ललितपुरको किष्ट मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरियो ।
आज बिहान बुवा बिहान ट्वाइलेटमा ढलेको र आसियूमा लगेर उपचार गर्दा मृत्यु भएको भन्दै अस्पतालबाट फोन आएपछि आश्चर्यमा परेको उनका छोरा प्रेम लामा तामाङले बताए । उनले भने– ‘ट्वाइलेटमा लडेपछि किन फोन नगरेको ? इर्मजेन्सी केश भएपछि आफन्तलाई फोन किन नगरेको भनेर हामीले प्रशासनलाई सोधिरहेका छौं ।
हिजोसम्म ठिक रहेको मान्छे ट्वाइलेटमा लडेको भने पनि हामीलाई शंका लाग्यो । सिसिटिभी फुटेज धमिलो गरिएको छ । लडेपछि आइसियूमा लगेर उपचार गर्दा मृत्यु भएको भने पनि पहिले मृत्यु भएपछि आइसियूमा पुर्याएको अर्को सिसिटिभीमा देखियो । अस्पतालले बिरामीको उपचारमा ठूलो लापरवाही गरेको छ ।’
आफन्तले मृतकको शरीर र सिसिटिभी फुटेज हेर्दा आइसियूमा लानुअघि नै मृत्यु भएको देखिएको दावी गरेका छन् । लडेको भनेको ठाउँको फुटेज हेर्दा धमिलो र केही नदेखिने भएपछि शंका लागेकोले सत्य–तथ्य छानविन गर्न माग गरेको उनीहरुले बताए ।
मृतककी छोरी मोक्तानले गएरातिसम्म परिवारको सम्पर्कमा रहेर कुरा गरिरहेको मान्छे आज बिहान मृत्यु हुनु् रहस्यमय भएको बताउँदै अस्पतालबिरुद्ध कारवाहीका लागि उजुरी दिने बताइन् ।
अस्पताल प्रशासनले पर्याप्त र चित्तबुझ्दो जानकारी नदिएको भन्दै मृतकमा आफन्तले अस्पतालको गेट घेराउ गरेका थिए ।
अस्पतालभित्र आक्रोशित आफन्त प्रवेश गर्न लाग्दा प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरेको छ । अस्पताल हातामा बाक्लो संख्यामा दंगा प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने अस्पताल प्रशासन र मृतकका आफन्तबीच छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
के अब फेरि लकडाउन हुन्छ ?
डा. केसीको अवस्था अत्यन्तै जटिल, चिकित्सकहरुले आन्दोलन गर्ने
१३ औं विश्व सामाजिक कार्य दिवस कर्तिपुरमा सम्पन्न
रक्सी खान पैसा नदिएपछि पन्युले हानेर श्रीमतीको हत्या
2018-05-19 2018-05-21 Postmandu
एम्बुलेन्स दुर्घटना हुँदा दुईको मृत्यु, गर्भवतीसहित दुई घाइते
2020-08-30 2020-09-01 Postmandu
अमिर बाबु कट्टेल प्रकाश अधिकारी रोशन भुजेल